E- Live Nepal – Page3– News Collection of Nepal
काठमाडौँ !! प्रहरी प्रधान कार्यालयले एमाले सांसद नवराज सिलवाल फरार अभियुक्त नभएको बताएको छ । केही समय अघि प्रहरीको सर्वाधिक खोजीको सूचिमा रहेका सिलवालले प्रतिनिधिसभा सदस्यको शपथ ग्रहण गरे लगतै प्रहरी प्रधान कार्यालयले बोली फेरेको हो । प्रहरी प्रधान कार्यालयका प्रवक्ता एवं डीआईजी मनोज नेउपानेले किर्ते मुद्दा प्रहरीले सरकारी वकिलको कार्यालयमा पठाएकोले अब सिलवाललाई पक्राउ […]
यी हुन् युवती कुट्ने व्यक्तिलाई छाड्न दवाव दिने रमिते मेयर चौधरी…..(पुरा बिवरण हेर्नुहोस्)
प्रश्न: मेयरज्यू, तपाईंको नगरपालिकास्थित देउकलिया गाउँमा बिहीबार बोक्सीको आरोपमा एउटी किशोरीलाई समाजकै अगाडि मरणासन्न हुने गरी कुटपिट गरेको घटना सार्वजनिक भएको छ, यो विषयमा तपाईंलाई जानकारी छ कि छैन ? जवाफ: किन नहुनु ? जानकारी छ । पीडितलाई अहिले धनगढी लगिएको छ, अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ । कुटपिट गर्ने व्यक्तिलाई पनि सार्वजनिक अपराधको मुद्दा लगाउन […]
जुम्ला । नेपालकी सुनमाया बुढा चीनमा सम्पन्न माउन्ट गोवालिगोङ अल्ट्रा ९टीएचटी० ५५ किलोमिटर म्याराथनमा प्रथम भएकी छन् । विभिन्न राष्ट्रका दुई सय ९३ जनाको सहभागिता रहेको उक्त म्याराथनमा उनी महिला समूहतर्फ पहिलो भएकी हुन् । उनले ५५ किलोमिटरको निर्धारित दूरी पाँच घन्टा ४४ मिनेट १९ सेकेन्डमा पूरा गरिन् । अल्ट्रा म्याराथन नेपाली समयअनुसार शुक्रबार बिहान […]